Amala walfaanee deetaa filamee jijjiiruuf kana fayyadami. Qaaqni kun kan mul'atu walfaanneen deetaa yoo filame Dhangii - Filannoo Dhangii yommu filatamu. Baafanni tokko tokko galfata taatoo 2D yookan 3D dhaan qofa argama.
Jijjiiramni uumame kamiyyuu qaphxii deetaa tokkoo qofa miidha. Fakkeenyaaf, yoo halluu jijjiirte maalimni hundi kan deetaa walfaannee keessaa halluu jijjiira.
Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Walfaannee Deetaa (Taattoota) fili
Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.
Wanta fakkaasaa filatameef dirqaalalee guutuu qindeessa.
Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.
Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.
Qaaqa Moggaasa Deetaa kana bani, moggaasa deetaa qindeessufi si dandeessiisa.
Kabala dogongoraa Y
Qaaqaa kana fayyadamuun hiika dirqala akaakuu taattoo murta'ee ti mul'at. Qabiyyeen qaaqa dirqala akaakuu taattoo wajjiin garra garrumma qaba.
Title is: Walfaannee Deetaa